Cervicitis - kurapa
Cervicitis inonzi chironga chechirchi chinopisa. Sezvo mutemo, utachiona hunokonzerwa nehosha dzepabonde. Kakawanda, kuputika kwechirwere chechibereki chinongova chinhu chimwe chete kubva kune urongwa hwose hwezviratidzo zvehutano hwepabonde.
Cervicitis yemukiriniki uye kurapa kwayo
Kutanga iwe unoda kunzwisisa kuti ndechipi chirwere chauri kutarisana naye. Kune mhando dzakasiyana-siyana dzechikwata chechirwere ichi:
chimiro chakaoma (chirwere chacho chakaonekwa kwete kare kare uye chinokurumidza kwazvo);
chimiro chisingaperi (utachiona mumuviri hwakauya munguva pfupi yapfuura, asi hunovapo ikoko zvishoma nezvishoma);
chimiro che purulent (pamusana pekutsvaira pamutsipa wechiberekero purulent nzvimbo dzakagadzirwa);
utachiona hwehutachiona (causative agent wehutachiona, hunoparadzirwa zvepabonde);
chimiro chebhakitiriya (pathogen bhakitiriya chirwere, kakawanda chinova gonorrhea, bacterial vaginosis).
Chronic cervicitis: kurapa
Kurapa rudzi urwu rwe cervicitis, hormonal suppositories inoshandiswa. Sezvo chimiro chisingaperi chekuderera kwechirwere chechivharo chechirwere, nyanzvi dzinoshandisa hormonal treatment. Sezvo mutemo, idzi dziri kugadzirira ne estrogen. Kakawanda, chirwere chinosangana nekukanganiswa kwemukati. Muchiitiko ichi, mushure mekudzivirira kwakakwana kunopesana nekurapa kwechirwere cervicitis, cryotherapy kana laser therapy inorayirwa. Kazhinji inoshandiswa kurapa cervicitis vanhu mishonga. Kuti uite izvi, 15 gr. Oak bark inodururwa mu 0,5 litita emvura anodha uye yakabikwa pamoto usingadziviriki kwemaminitsi gumi nemashanu. Muto wacho wakadzivirirwa kusvika 35 ° C uye douching inoitwa katatu pazuva. Iyo decoction ye calendula inewo-anti-inflammatory properties. Iyo inogona kushandiswa kushandiswa kana kutengesa. Asi zvakakosha kuyeuka kuti kunyange kusarudzwa kwakadaro kusingakuvadzi kunogona kuvhiringidza maruva emukadzi uye kukonzera matambudziko. Iva nechokwadi chekukurukura neyanyanzvi uye kumuudza.
Purulent cervicitis: kurapa
Kunyangwe maitiro akadaro akaoma, pakutanga, anotariswa zvakanaka nemitemo yakawanda. Muchiitiko ichi, kurapwa kwe cervicitis hakugoneki pasina kushandiswa kwemishonga inorwisa mabhakitiriya. Sulfonamides inoshandiswa zvakare. Nenhamo, kudyara pathogenic microflora inokubvumira kusarudza mushonga unoshanda zvikuru. Kana chikonzero chacho chiri chlamydia, chiremba anorayira tetracycline kana doxycycline. Ne viral pathogen, chirwere chinoda kudiwa kusimbisa masimba ezvirwere. Mukuwedzera kune zvinodhaka zvinodhaka, murwere anowanzopiwa mamwe chamomile kana marigold.
Kurapa kweionspecific cervicitis
Zita iro rinoreva kuti chirwere chacho chinowanikwa nekushandurwa kwechidimbu chinonzi microflora chemukadzi uye hachina kubatana nezvirwere zvepabonde. Kazhinji kazhinji izvi zvakasiyana-siyana zvechirwere chacho chinokonzerwa nebhakitiriya vaginosis. Chiremba achakwanisa kugadza kurapwa chete mushure mokunge kudyara, sekurapa cervicitis, munyaya iyi, zvinoreva kudzorerwa kwe microflora.
Kurapa kweCervicitis pakuzvitakura
Yeuka kuti usati waenda kuna chiremba, iwe uchafanirwa kutora chirwere chepamuviri. Zvadaro nyanzvi ichakwanisa kupa chirwere chekuchengetedza cervicitis iwe. Kubva mishonga inorwisa mabhakitiriya, yakachengeteka, somuenzaniso, inotumidzwa, ichagadzirirwa. Kana chikonzero chekuputika chiri chlamydia, nyanzvi inogona kupa tetracycline, kugadzirira kweboka re quinolines kana azalides. Mushure mekudzikiswa kwekurwadza kwakanyanya, kurapwa kwechikadzi kunorongedzwa nemhinduro dze chlorophyllipt kana dimexide. Chinhu chikuru ndechokuti kurapwa kwe cervicitis yemukirini kunofanira kuitwa nenzira yakaoma, uye zvakakosha kubata mushandiradzi wevakadzi kudzivirira kudzoka zvakare.
Zvirwere zveivhai mumadzimai
Makhanduru Bifidumbacterin mune gynecology
Pazuva ripi mushure mekuenda kumwedzi ndinogona kubata pamuviri?
Lithotripsy yeinso mabwe
Hazvina kufanana pamwedzi
Urolithiasis - chii chinonzi urolithiasis uye chirwere chinogona kurapwa sei?
Ko chlamydia inoparadzirwa sei?
Bhokisi racho rinorwadza musati rapera mwedzi
Borjomi yakanaka uye yakaipa
Nechii chekubatanidza girazi tsvuku?
Pimples pamusoro pechiso checheche
Kudyara daffodils mukati megore
Chirairo chekushongedza - kuti unzwisise sei mazuva ano?
Baba ve pamuviri Megan Fox vakavimbisa kuti akanga akamirira mukomana
Mwana angagona kupa tei rini?
Lymphocytes yakakwirira, neutrophils inoderedzwa mumwana
Nezvinofanira kupfeka mabhozi echando?
Pudding ne cherries
Nzira yekubika pike muchoto?
18 kungwarira pfungwa dzakajeka kuitira mararamiro akanaka
Mazuva mangani ovulation inopera?